China Mezzanine leposi mveliso kunye nabathengisi | Liyuan
I-Mezzanine rack yinkqubo yokurhabaxa ephezulu kuneenkqubo eziqhelekileyo zokurhabaxa, okwangoku ivumela abantu ukuba bahambe ngaphezulu kunezo ziqhelekileyo ngezitepsi nangaphantsi.
Uyithengaphi ipallet yensimbi?
Ngokuqinisekileyo ukusuka kumzi-mveliso waseLiyuan iMezzanine rack iyinkqubo yokurhabaxa ephezulu kunenkqubo yesiqhelo yokurhabaxa, okwangoku ivumela abantu ukuba bahambe ngaphezulu kunezo ziqhelekileyo ngezitepsi nakwimigangatho..Le yindlela esebenzayo yokusebenzisa isithuba esingaphezulu kweeshelfu. Indawo eninzi isetyenziselwa ukufikelela kwindawo ethe nkqo kwindawo yakho yokugcina.
Ukwahluka kumgangatho we-mezzanine, emazantsi erhasi ye-mezzanine ixhaswa ziishelufa, ngelixa umgangatho we-mezzanine uxhaswa ziikholamu.Kukho iintlobo ezimbini zerack mezzanine, enye inamazinga asezantsi kunye nenqanaba eliphezulu lokuba zii-racks, kwaye enye yenza inqanaba elisezantsi yokubeka kodwa kwinqanaba eliphezulu kumgangatho intsimbi.
I-Rack i-Mezzanine exhaswayo
I-Rack mezzanine exhaswa, zombini i-pallet rack kunye ne-longspan eshalofini exhaswa yi-mezzanine zilungile, ngokubhekisele kwiimfuno zokugcina ezahlukeneyo, sinokukhetha uhlobo olufanelekileyo lwe-mezzanine kunye nomthamo wokulayisha kubathengi, bonke ubungakanani, inqanaba le-mezzanine, amanqanaba e-rack, kunye nobungakanani bomthwalo zinokwenziwa
Iplani yeMezzanine Rack
Olu hlobo lwezantsi lwe-mezzanine luxhaswa zii-racks, kwaye phezulu liqonga lesinyithi, ngaphantsi komgangatho wentsimbi kukugcina iipelethi okanye ezinye izinto zokugcina iimveliso, kwaye ngaphezulu akukho zi-racks, zihlala zilula ukugcinwa kwemveliso. Zombini ezi zixhobo ziphakathi.
1.Ukuthwala umthwalo wee-racks, i-200-3000kg kwinqanaba ngalinye, kumthamo womthwalo womgangatho: 200-1000kg nge-sqm nganye
2. Impahla ekrwada yi-Q235 yentsimbi
3. Isinyusi seHydraulic okanye ifolkifti inokusetyenziselwa ukuphakamisa iimpahla kumgangatho ophezulu
Umgangatho wentsimbi kumqadi osecaleni
Umgangatho wentsimbi kumqadi ophakathi
Umgangatho wentsimbi kunye nomgangatho wokhuni unokusetyenziswa. Zininzi iindidi zomgangatho wentsimbi: umgangatho wentsimbi oqhelekileyo, umgangatho wentsimbi kunye nokuqinisa imivalo yokuthwala ubunzima, umgubo wawutyabeka umgangatho ongashukumiyo, kwalenza umngxuma ongashukumiyo, ukuxhotyiswa ngentsimbi njalo njalo.
Uyilo lobungcali njengemfuneko yakho
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kwiFektri ngexabiso lokhuphiswano
Umzobo we-3D CAD uyafumaneka
Egqithileyo Pallet yentsimbi
Okulandelayo: Umsebenzi ophakathi kunye noXanduva loMthwalo weCantilever
Indawo yokugcina impahla iMezzanine Floor Steel Platform